Ikhulelwe amawele intombazane, 13, 'edlwengulwe' amadoda angu-8 | isiZulu
Kudlwengulwe intombazane, 5, enyamalale isesontweni
Kudlwengulwe kwabulawa intombazane, 4, eGoli
Kaduna, Nigeria - Intombazane, 13, okusolwa ukuthi yadlwengulwa amadoda angu-8, kubalwa nomholi webandla lamaSulumane, kuthiwa inezinyanga ezinhlanu ikhulelwe amawele.
Lesi sigameko senzeka eKabua, eKaduna.
Inhloko yenhlangano i-Arridah, uHajiya Rabi Salisu, utshele abezindaba iNews of Nigeria (NAN) ukuthi ngoMgqibelo eKaduna wabikelwa inhlangano ukuze izosiza intombazane ithole ubulungiswa.
Uthe inhlangano izokweseka intombazane iphinde ilandele icala enkantolo kuze kuba wukuthi ithola ubulungiswa.
OLUNYE UDABA:Ingane 'edlwenguliwe' itholakale ilenga esihlahleni
I-NAN izwe ukuthi umholi webandla lamaSulumane ungumakhelwane wabazali bale ntombazane.
URabi uthe: "Sibikelwe ngecala, ngithanda ukusho ukuthi selokhu ngaqala ukusebenza angikaze ngihlangabezane nento enje kusukela emacaleni okudlwengulwa nokuhlukunyezwa kwezingane angaphezu kwangu-400.
"Kubuhlungu ukubona amadoda angu-8 edlwengula intombazane, 13. Le ntombazane ikhulelwe ekubeni ingakahlosi nokuhlosa kanti nabazali bayo bafuna ukuba ihushule isisulu ukugwema ukuhlazeka emphakathini.
"Kungenzeka ukuthi isisuleleke nge-HIV/AIDS noma ezinye izifo ezisulelana ngokocansi.
"Sifuna kwenzeke ubulungiswa yingakho sifuna ukwesekwa wuhulumeni waseKaduna, yizo zonke izinhlangano zamalungelo abantu nabaholi bamabandla ukuze kuzosizakala izingane ezihlwempu ezibhekene nezinkinga zansuku zonke."